B2B Faahfaahinta iyo Rajo bixinta Mintigo | Martech Zone
Khamiis, Maarso 1, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ka dib markii aan ka tagay warshaddii wargeysyada, mid ka mid ah shaqooyinkii ugu horreeyay ee aan qabtay waxaa ka mid ahaa in aan horumariyo keydka macluumaadka ee iibiyeyaasha B2B Adiga oo adeegsanayna qalab saddexaad, waxaan soo saarnay qaab aan ku horumarinayno tusmo qaas ah oo ku saabsan astaamaha adag ee salka ku haya macmiilkaaga. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ku aqoonsan lahayn macaamiishaada ku habboon dakhliga, tirada shaqaalaha, lambarrada warshadaha, sannadaha adeegga, goobta iyo wixii macluumaad ah ee aan heli karno.
Markii aan ogaanay sida macaamilka guud u eg yahay, waxaan u adeegsan doonnaa astaamahaas si aan u dhalino xog-ururinno rajo leh. Uma baahnid inaad la timaadid ciyaar, waxa keliya ee aad u baahnayd inaad sameyso waxay ahayd inaad liisaska rajada si isku xigxiga u dhigto… yaa u muuqday kuwa ugu dhow sida macaamiishaada oo kale oo u eegay kuwa ugu yar macaamiishaada. Waxay ahayd wax yar oo aad u adag tan iyo markii tusmada iyo dhibcaha lagu daray tusayaal fara badan… laakiin kuwani waa aasaaska.
Waxay u muuqataa dadka Mintigo Qaatay qaabkan, ku dabaqday shabakadda, kuna dhejisay steroids!
The Mintigo waxay liis garaysaa 5 sababood oo loogu adeegsado adeeggooda:
Gaar Dhageystayaasha Xaqa ah - Macluumaad dhammeystiran oo sax ah oo ku saabsan dadka iyo shirkadaha labadaba waxay kuu oggolaanayaan inaad dhaafto ilaaliyeyaasha albaabka oo aad si toos ah ula xiriirto kuwa go'aanka gaara, hagaajinta dhuumaha, heerka xiritaanka, iyo wareegga iibka.
Kordhi waxtarka dhuumaha - Mintigo badan ayaa horseed u noqda iibka marka loo eego ilo kale, illaa 70% iibsi ka badan maalintii, sida ku cad sahannada macaamiisha Mintigo.
Fudud, Qulqulka Socdaalka Lead - Waxay kugu qaadaneysaa shan daqiiqo inaad ku buuxisid awoodda leedhka bil kasta - u oggolow Mintigo inay kuu qaaddo qaadista culus adiga oo saadaalin kara socodka Mintigo ee la xaqiijiyay. Shaqaalaha suuqgeyntu waxay si dhakhso leh uga baaraandegi karaan hogaamin badan iyaga oo ku kalsoon kalsoonida ah in dhuumahooda mar walba buuxsami doonaan.
Gaabinta Wareegyada Iibinta - Mintigo waxay xiraysaa aragti dheeri ah oo ku saabsan xiriir kasta maxaa yeelay hoggaamiye kastaa wuxuu u dhigmaa astaanta iibsadahaaga ugu sarreeya. Mintigo-la xaqiijiyay ayaa horseed u ah kooxaha iibka macluumaadka ay uga baahan yihiin qorshe xisaabeed wax ku ool ah oo u oggolow suuqleyda inay eber ku yeeshaan bartilmaameedyada ololaha kala qeybsan.
Abuur durdurro Dakhli cusub - Mintigo wuxuu kashifayaa suurtagalnimada suuq qarsoodi ah isagoo iskaan u galaya in ka badan 10 milyan oo shirkado rajo leh, helitaanka kuwa u dhigma oo ku saleysan astaamo qoto dheer, halkii uu ka heli lahaa macluumaad fudud oo farsamo oo keliya ah. Macaamiisha waxay ogaadeen in ilaa 90% ee hogaaminta Mintigo ay ku cusubeyd iyaga - xitaa suuqyada waxay horeyba si fiican ugu baareen liisaska.
Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa saaxiibkay iyo macmiilkiisa Isaac Pellerin, Maareeyaha Suuqgeynta Dakhliga ee TinderBox, oo ii tilmaamay adeeggan. Sanduuqa dabagalka waa iibinta softiweer software taasi waxay kuu fududeyneysaa inaad abuurto, tafatirto oo aad dabagasho soo jeedinta iibka. Waan isticmaalnaa waana jecel nahay!
Tags: b2bjiilka hogaaminta b2bbaadi goobka b2bgoolasha b2bmintigo